Frantsa: Ethylotest Tsy Maintsy Atao Hisorohana Ny Alikaola Eny Am-pamiliana Fiara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2012 1:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, 한국어, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Français
Manomboka ny 1 Jolay 2012, ny mpamily fiara misy maotera rehetra ao Frantsa dia tsy maintsy mandalo ‘éthylotest’ daholo araka ny didim-panjakana nivoaka tao amin'ny Gazetim-panjakana tamin'ny Alakamisy 01 Martsa 2012. Io fepetra io dia heverina hampihena ny isan'ny loza aterak'ireo mpamify tsy ampy fiheverana domelin'ny alikaola.
Ao amin'ny tranonkala Le Plus du Nouvel Observateur Mathieu Sicard no manazava ilay fepetra vaovao :
Tsy maintsy mampiseho iray mbola mandeha tsara amin'izany an'ireo polisy manakana anao ianao. Raha toa ianao nisafidy ilay karazany misy “cristaux”, dia tsy maintsy manana roa ianao raha kely indrindra (ny iray dia ilay notsofinao talohan'ny niainganao, ary iray vaovao haseho azy). Roa taona ny fe-potoam-pahavelomany. Hevero koa araka izany ny hijery ny datin'andro maha-ara-dalàna azy.
Jean-Baptiste le Dall, mpisolovava ao amin'ny fitsarana sady filoha lefitry ny “Automobile Club des avocats”, dia mampahatsiahy koa fa efa hatrany amin'ny taona 1970 ny momba ny tsy maintsy hanànana “éthylotest” ao anatin'ny fiaranao, saingy nijanona ho natoritory io fepetra io noho ny tsy fisian'ny didy fampiharana. Mipetraka araka izany ny fanontaniana mikasika ny fahafaha-mampihatra azy :
Ny 22 jolay, mamily mpisetrasertra iray nitondra fiara matanjaka iray, no nifaoka renim-pianakaviana iray sy ny zanany vavikely 11 taona tao anaty faritra natao ho an'ny mpandeha an-tongotra tao amin'ny boriborintany faha-XIX tao Paris. Nandositra ilay mpamily nahavanon-doza sy ireo mpandeha niaraka taminy. Minitra vitsy taty aoriana izy ireo no tratran'ny polisy. Ilay mpamily mpisetrasetra, araka ny lahatsoratra navoakan'ny sehatra forum-politique.org dia olona iray :
Tanatinà loza iray hafa, io andro io ihany dia mpamily fiara iray, 24 taona, no niteraka ny fahafatesan'ny vehivavy iray 22 taona tao Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ary nandositra ihany koa. Nandritra ny faran'io herinandro io ihany, lehilahy iray no naratra mafy tao Saint-Georges d’Oléron raha toa kosa ny zanany lahy ka mbola miady mafy amin'ny fahafatesana.
Ao Frantsa, maherin'ny 450 000 ireo mpamily fiara mifamoivoy tsy manana fahazoan-dàlana. Hita amin'ireny tranga rehetra ireny fa, ireo mpamily mpisetrasetra dia tsy nisy nanana fahazoan-dàlana hamily, nandositra sy namela ireo niharam-doza hitsirara amin'ny tany ary nanana tahanà alikaolateo anelanelan'ny 0,5 sy 0,8 grama tany anatin'ny ràny. Araka ny tranonkala Plan B, ny tahan'alikaola amin’io haao io dia iharan'ireto famaizana manaraka ireto:
Ny 30 Jolay lasa teo, zazalahy kely iray 11 taona no maty teo amin'ny sisin-dàlana teo anatrehan'ireo niteraka azy, noho ny nataonà mpamily iray nanana tahan'alikaola 1,18 g/litatra. Hita fa rehefamihoatra ny 0,8 mg, ny sazy dia ny fisintonana ny fahazoan-dàlana hamily sy fampidirana am-ponja mety ho tonga hatramin'ny 2 taona, ary lamandy 4 500 euros, fihazonana ny fiara ary fisintonana isa enina ihany koa. Ny seha-pirenena iraisan'ireo ministera ho fanaraha-maso ny fahazoana antoka ny fifamoivoizana an-dalambe dia mamoaka araka izany, fa:
KrisVador manoratra hoe :
Mpamaky iray tao amin'ny leparisien.fr no manamarika tanaty lahatsoratra iray nivoaka momba ny iray tamin'ireo loza :
Grund mamaly mpamaky iray, dia manoratra momba io lahatsoratra io ihany :
Mumbly, mpamaky iray ao amin'ny liberation.fr manampy hoe :